Faah Faahin: Dagaal Maxaabiis Looga Qabtay Ciidanka Kenya oo Ka Dhacay Duleedka Degmada Afmadoow.
Saturday March 19, 2016 - 15:50:54 in Wararka by
Kadib dagaallo culus oo muddo laba saacadood ah qaatay ayay ciidamada xarakada Shabaabul Mujaahidiin ugu suurtagashay in ay cagta mariyaan ciidamo Kenyaan ah iyo gaadiidkii ay wateen oo ku socdaalayay Jubbada Hoose.
Wararka ka imaanaya duleedka degmada Afmadoow ayaa sheegaya in weerar dhabagal ah loo dhigay ciidamada gumeysiga Kenya kuwaasi oo kasoo amba baxay deegaanka Qooqaani.
Wariye ku sugan Jubbooyinka ayaa soo sheegay in dagaal culus uu ciidanka Kenya ku qabsaday agagaarka Tuulada Xayo oo kala qeybisa Qooqaani iyo Afmadoow.
Warar hordhac ah ayaa xaqiijinaya in laba askari Kenyan ah maxaabiis ahaan loogu qabtay dagaalka halka 12 askari oo katirsan Melleteriga Kenya meydadkooda lagu arkay goobta dagaalka.
6 kamid ah gaadiidka gaashaaman ee ciidanka Kenya ayaa lagu gubay dagaal, wararka ayaa intaasi ku daraya in mid kamida diyaaradaha dagaalka melleteriga Kenya waxyeello kasoo gaartay madaafiicda lidka diyaaradaha oo lala helay xilli ay isku dayayeen in ciidamada Muslimiinta ay ka fujiyaan Kenyaatiga.